दाहालबाट न्यायको आशा, माग सम्बोधन नभए गङ्गामाया आमरण अनशनमा बस्ने « Pahilo News
दाहालबाट न्यायको आशा, माग सम्बोधन नभए गङ्गामाया आमरण अनशनमा बस्ने
प्रकाशित मिति :5August, 2016 5:18 pm
२१ साउन । विगत छ वर्षदेखि वीर अस्पतालको क्याबिन नं ७ मा अनशनमा बस्दै आउनु भएकी गङ्गामाया अधिकारीले नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट न्याय पाउने आशा गरेकि छन् ।
गङ्गामायाले शुक्रवार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री आएसँगै आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यदि यो सरकारबाट पनि आफूलाई न्याय प्राप्त नभए अबको पाँच दिनपछि आमरण अनशन बस्ने समेत बताइन् ।
उनले भनिन्– “प्रचण्ड माओवादी पार्टीका मात्रै नभएर राष्ट्रकै प्रधानमन्त्री भएकाले मजस्ता अन्यायमा रहेकालाई उनले न्याय दिनैपर्छ ।” यही साउन १६ गतेदेखि उनले वीर अस्पतालमा नै बसेर अनशन गर्न थालेको पाँचवर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको छ ।
विसं २०७१ असोज ६ गते अनशन थालेको ३३४ दिन हुँदा उनका श्रीमान् नन्दप्रसादको अनशनरत अवस्थामा नै मृत्यु भएको थियो । उनको शव अहिले पनि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा रहेको छ । न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने गङ्गामायाले अडान राखेपछि नन्दप्रसादको शव अस्पतालमा नै राखिएको छ ।
‘श्रीमान्को लास बाकसमा राखिएको छ’ गङ्गामायाले भनिन्–‘स्रकारले मरेको मान्छेको लाश कति दिनसम्म बाकसमा राख्नसक्छ ? न्याय नदिने हो भने म पनि अब बाँच्नुको कुनै अर्थ नै छैन ।’
जीवनमा कहिल्यै सिटामोल समेत खानुपर्ने अवस्था नआएको बताउने गङ्गामाया अहिले औषधि र पानीको भरमा मात्र जीन्दगी लम्ब्याउनुपर्दा निकै कष्ट भएको बताउनुहुन्छ ।
उनले भनिन्–‘मलाई दिन र रात कटाउन गाह्रो भइसक्यो । घन्टा र मिनेटसमेत छुट्याउन सक्दिन ।’ दुई वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि एक्लो योद्धा झैँ अनशनरत गङ्गामाया अब आफूले कि न्याय प्राप्त गरेर सहज जीवनयापन गर्ने कि मरेर जाने अन्तिम निर्णयमा पुगेको बताउछिन् ।
उहाँले छविलाल पौडेल, भीमसेन पौडेल, जानुका पौडेल, पशुराम पौडेललगायतलाई किटानी गरी चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको भए पनि हालसम्म उक्त मुद्दाको कुनै सुनुवाई भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आरोपी भीमसेन पौडेल र पशुराम पौडेललाई पक्राउ गर्नासाथ तत्कालीन (एमाओवादी) नेताको विरोध र धम्कीका कारण उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
विसं २०६१ मा गङ्गामायाका १७ वर्षे छोरो कृष्णप्रसादको तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको थियो । आफ्ना छोराको हत्या गर्नेविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका अधिकारी दम्पतीले आफूहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै त्यहीँ अनशन सुरु गरेका थिए ।
प्रहरी प्रशासनले अधिकारी दम्पतीलाई कमलपोखरी प्रहरी चौकीमा लगी ३९ दिन थुनेपछि उनीहरुले भोक हडताल सुरु गरेका थिए । भोक हडताल सुरु गरेपछि उनीहरुलाई जबर्जस्ती वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा राखेर अनशन तोडाउने प्रयत्न गरिए पनि त्यो सफल हुनसकेन । परिणाम २०७१ साल असोज ६ गते नन्दप्रसादको मृत्यु भयो । रासस
एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
पाँचथर, १७ जेठ । पाँचथरमा गए राति एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ
दुई न्यायाधीशसामु नैतिक प्रश्न– विवादबीच इजलासमा बस्ने कि नजिर मानेर बाहिरिने ?
काठमाडौं, १७ जेठ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित परेका रिटउपर सुरु भएको बहसमा निवेदक र विपक्षी दुवैले
बढी भएको शिक्षक दरबन्दी खारेजीको तयारी
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले बढी भएको शिक्षक दरबन्दी खारेज गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत्
पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता : हिमालय पदमार्गको डिपिआर बनाइने
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक–सांस्कृतिक बहुलताबाट